Tag: kutengesa zororo | Martech Zone
Tag: kutengesa zororo
Gore rakapera, 1 mu5 vatengi vakaita ZVESE zvavo zveKisimusi kutenga online! Yikes… uye zvakafanotaurwa kuti gore rino, chetatu chevashambadzi vese vepamhepo vanozoita zvavanotenga kuburikidza nefoni yavo kana piritsi. 44% vari kutenga kubva pahwendefa uye vangangoita vese vari kushandisa desktop yavo kutenga. Iwe uri muchimiro chakaomarara gore rino kana usati wagadziridza masaiti ako uye maemail evanotenga nharembozha - asi hazvina kunonoka kusvika
Isu tinoziva haazi Mbudzi parizvino, asi mazororo ari kukurumidza kusvika kune vatengesi. Kuti ikubatsire kutora kushambadzira kwako kwezororo mune giya, Offerpop isa pamwe iyi Holiday Panic infographic neese ehoridhe nhare uye zvemagariro maitiro auchasangana nawo mwaka uno. Vanenge hafu yevatengi vese vari kuzoshandisa vezvenhau kuti vawane yakasarudzika chipo mazano uye madhiri ezororo rinouya. Wakagadzira chirongwa chehoridhe futi here? Wakambobatanidza magariro here